चीन Epoxy रंग निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु - पूर्वी Argon रासायनिक
घर > उत्पादनहरु > तेल आधारित रंग > Epoxy रंग
Epoxy रंग निर्माताहरु
Epoxy रंग, पनि epoxy राल anticorrosive रंग को रूप मा जानिन्छ, anticorrosive रंगहरु को बीच सबैभन्दा व्यापक रूप मा प्रयोग गरिएको रंग हो। सामान्यतया बोल्दै, कोटिings्गहरु मा अधिक epoxy जीनहरु संग युक्त हुन्छन् सामूहिक रूप मा epoxy रंग को रूप मा उल्लेख गरीन्छ।
Epoxy रंग उच्च भण्डारण स्थिरता र एक लामो शेल्फ जीवन छ। सामान्यतया, यो एक एजेन्ट को उपचार बिना लगभग दुई बर्ष को लागी राख्न सकिन्छ। आसंजन धेरै बलियो छ, चित्रित रंग धेरै विश्वसनीय छ, र रंग पतन गर्न सजिलो छैन। उत्कृष्ट यांत्रिक गुणहरु, लगाउने प्रतिरोध, प्रभाव प्रतिरोध, कडा रंग फिल्म, तापमान परिवर्तन र अन्य कारकहरु को कारण दरारहरु को लागी सजिलो छैन। Epoxy राल एक स्थिर संरचना छ, जो कोटिंग एसिड, alkalis, जैविक विलायक को प्रतिरोधी बनाउँछ, र यो संक्षारक पदार्थहरु को लागी पस्न को लागी गाह्रो छ, र बलियो अभेद्यता छ।
उत्कृष्ट प्रदर्शन र epoxy राल को विशेषताहरु को कारण, epoxy रंग व्यापक रूप मा छत लीकेज रोकथाम, एयरपोर्ट रनवे, viaduct फुटपाथ सुदृढीकरण, पार्किंग स्थल, खेल मैदान, कारखाना फर्श, भित्ता, जहाज, डेक, तहखाने र गोदामहरु, सुरंगहरु, आदि मा प्रयोग गरीन्छ। विभिन्न क्षेत्रहरु।
Epoxy फ्लोर पेन्ट
Epoxy फ्लोर रंग एक दुई घटक फ्लोर epoxy, pigments, additives, विलायक र इलाज एजेन्टहरु बाट बनेको रंग हो।
विभिन्न रंग Epoxy Anticorrosive Topcoat
विभिन्न रंग epoxy anticorrosive Topcoat epoxy राल संग एक कोटिंग को प्रकार र मुख्य फिल्म बनाउने पदार्थ को रूप मा संशोधित epoxy राल, जो उत्कृष्ट आसंजन र रासायनिक जंग प्रतिरोध छ।
एक घटक Epoxy एस्टर प्राइमर
एक घटक epoxy एस्टर प्राइमर epoxy एस्टर राल, विस्तारक वर्णक, विरोधी जंग वर्णक, दहन सहायता, ड्रायर, जैविक समाधान, आदि बाट बनेको छ।
रंगीन Epoxy प्राइमर
रंगीन epoxy प्राइमर एक दुई घटक epoxy कोटिंग, पनि epoxy उच्च शक्ति कोटिंग को रूप मा जानिन्छ। यो एक उपचार एजेन्ट को रूप मा प्रतिक्रियाशील पतला र toughened polyurethane को उपयोग गरेर विलायक मुक्त छ।
Epoxy बादल फलाम मध्यवर्ती रंग
Epoxy क्लाउड फलाम मध्यवर्ती रंग एक epoxy कोटिंग र gray्ग को रूप मा ग्रे अभ्रक फलाम अक्साइड, बेस सामग्री को रूप मा epoxy राल र उपचार एजेन्ट को रूप मा पॉलियामाइड राल को उपयोग गरेर तैयार गरीन्छ।
Epoxy कोइला टार रंग
Epoxy कोइला टार रंग एक epoxy राल, कोइला टार पिच, विरोधी जंग पिग्मेंट, additives, परिमार्जित amine बाट तैयार गरीएको थियो।
चीन मा एक पेशेवर Epoxy रंग निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु को रूप मा, ईस्ट आर्गन केमिकल अनुकूलित को निर्माण को समर्थन गर्दछ Epoxy रंग। एकै समयमा, सबै उत्पादनहरु फैशनेबल, उन्नत, टिकाऊ र उत्तम दर्जेको, र CE प्रमाणीकरण छन्। हाम्रा उत्पादनहरु को उच्च गुणस्तर आंशिक रूपमा छ किनकि हामी हाम्रो आफ्नै कारखाना छ र आंशिक रूपले हामी अनुभवी र कुशल कामदारहरु छ। के तपाइँ थोक Epoxy रंग लाई समर्थन गर्नुहुन्छ? निस्सन्देह, यदि तपाइँ थोक, हामी तपाइँलाई सस्तो मूल्य, छुट र उद्धरण प्रदान गर्न सक्छौं। यसको अतिरिक्त, यो छुट उत्पादनहरु किन्न ठीक छ। यदि तपाइँ हामी संग सहयोग गर्न र उत्पादन किन्न चाहानुहुन्छ, हामी यसलाई कम मूल्य मा बेच्न सक्छौं। जस्तै भनिएको छ: सहयोग एक जीत-जीत हासिल गर्न! हामी तपाइँ संग सहयोग र एकसाथ साझा विकास साकार गर्न को लागी तत्पर छौं।